Androany no andro fiasana voalohany aorian'ny fialantsasatry ny taom-baovao. Ny andro voalohany amin'ny fananganana dia andro nahafaly an'ireo mpiara-miasa rehetra nandoa ny firarian-tsoa ny taona vaovao. Ny maraina dia tonga tao amin'ny Toilet Seat Cover- Center famokarana am-pitiavana izahay ary niditra tao amin'ny faritry ny birao. Izay hitanay sy ...Hamaky bebe kokoa »
Ny sandan'ny tsenan'ny fonon'ny trano fidiovana amin'ny 2020 dia US $ 2 miliara. Miorina amin'ny fikarohana sy fanamarihana etsy ambony, ny ekipanay dia manana tahan'ny fitomboana isan-taona 6,2% hatramin'ny 2021 ka hatramin'ny 2027, ary antenaina hitombo ao anatin'ny dimy ka hatramin'ny fito taona ho avy. Miorina amin'ny trano fidiovana se ...Hamaky bebe kokoa »
Fiarahabana taom-baovao sinoa- Vokatra taratasy Zhonghe
Fotoana fandefasana: Feb-08-2021
Ho an'ireo mpanjifantsika sarobidy: Tianay ny manararaotra ity fotoana ity hanolotra ny fisaorana feno noho ny fanohananareo tsy misy fetra mandritra ny taona sarotra. Ny fahombiazantsika dia tsy ho tanteraka raha tsy misy fiaraha-miasa lehibe iarahanay amin'ny orinasanao sy ny fifandraisanay manokana amin'ny tsirairay ...Hamaky bebe kokoa »
Tongasoa ny mpanjifa hitsidika ny orinasa ary hitarika ny asanay
Tongasoa ny mpanjifa hitsidika ny orinasanay ary hitarika ny asanay Tamin'ny 27 Janoary, ny mpitarika ny governemanta eo an-toerana sy ny filohan'ny filankevi-pitantanan'ny mpanjifa manan-danja dia nitsidika ny orinasanay hitsidika ireo mpiasa mpamokatra laharana voalohany izay mifikitra hatrany amin'ny asany, ary amin'ny anaran'ny mpanjifa, e ...Hamaky bebe kokoa »
AMIN'NY MPAMORA PAPER IRAY, NAHOANA NO NO'ASA ANAO?
* FAHASALAMANA SY NY SAFETY Misoroka ny fitomboan'ny bakteria, manala ny fahalotoan'ny fiampitana ary manampy amin'ny fisorohana ny tsy fahazoana aina ara-tsaina vokatry ny fifandraisana mivantana amin'ny fonon'ny fidiovana. * SORATRA 100% Mampiasà fitaovana biodegradable. Mety levona ny rano. Ny fonony seza fidiovana taratasy azo esorina rehefa avy ampiasaina. * MANARAKA ...Hamaky bebe kokoa »
Zhonghe taratasy fanadiovana seza taratasy fidiovana
Ny rafitra fanadiovana fidiovana fidiovana ho an'ny fahasalamana avy amin'ny Zhonghe Paper Products dia fomba iray mahomby hiantohana ny fahadiovan'ny trano fidiovana. Izy io dia misy rakotra seza fidiovana sy dispenser mora ampiasaina ary mpanadio seza fidiovana manitra. Ity fanamainana haingana sy madio alikaola ity ary fampiharana iray an'ny mpanjifa ...Hamaky bebe kokoa »
Vokatra famoronana- Fonenana fonenana kabine
Fonon-seza fidiovana mihosin-tànana - Karazan-taratasy fonosana fidiovana mamorona fidiovana tsara ao anaty rano, tsy misy ahiahy Ny pulp hazo tany am-boalohany dia manana solubility rano tsara izay tsy mora ny manakana ny fidiovana Mety habe azo ialana amin'ny tsy fahazoan'ny hoditra ...Hamaky bebe kokoa »
Fotoana fandefasana: Jan-03-2021
Ny valim-panadinana dia ny fahazoan-dàlana hivoahana, hoy izy ireo ary ny Jefes de Departamento de Producción dia nomen'ny alàlan'ny alàlan'ny fankalazana ny zava-dehibe seminario. 2021.Debido a la explo ...Hamaky bebe kokoa »
Fihaonambe Seminera voalohany momba ny tsenan'ny fonon'ny trano fidiovana
Talohan'ny nifaranan'ny fialantsasatry ny taom-baovao dia nampiantso ny lehiben'ny famokarana sy ny sampana hafa ary ny mpitantana antonony sy antitra izahay hanao seminera lehibe anio. Mifanakalo hevitra sy mampihatra drafitra sy hetsika isan-karazany ho an'ny paikadin'ny orinasa sy ny drafitra fampandrosoana amin'ny 2021. Noho ny ...Hamaky bebe kokoa »
Masinina fikosehana haingam-pandeha mba hahatonga ny sisin'ny taratasy hilamina sy ho malama kokoa
Fotoana fandefasana: Jan-02-2021
Ny Fengcheng Zhonghe Paper Products dia nampiditra ny milina fametahana mandeha ho azy hanaparitahana ny sisin'ny taratasy, izay mety hahatonga ny sisin'ny taratasy ho an'ny horonan-taratasy sy ny taratasy firakotra ho milamina kokoa. Na dia somary avo kokoa noho ny teo aza ny vidin'ny taratasy noho ny fizotry ny famokarana iray hafa, ny fonon'ny sezika aorinan'ny fikororohana dia mor ...Hamaky bebe kokoa »
Tampoka teo, dia hifarana ny 2020. Amin'ity taona ity, ny fihetsem-pon'ny tolona dia mameno ny ranomasontsika, ary ny fanahin'ny tolona dia manangana ny hazondamosin'ny firenena. Na inona na inona zavatra niainantsika, dia ny traikefa sy ny fitomboana nomen'ny taona antsika. Tokony ho feno grati ...Hamaky bebe kokoa »
Fanaraha-maso ny andraikitra ara-tsosialy
Ny Fengcheng Zhonghe Paper Products dia nandany ny fanaraha-maso ny andraikitra ara-tsosialy nokarakarain'ny Bureau Veritas tamin'ny taona 2020 indray. Tamin'ny alàlan'ity fanaraha-maso ity dia nohamafisina tanteraka ny tombony amin'ny fitantanana, fa ny fikarohana sasany kosa dia mila anay manatsara sy manatsara hatrany.Hamaky bebe kokoa »